Ku xir khariidad miis Excel ah - Geofumadas
Disember, 2009 ArcGIS-ESRI, GIS kala cayncayn ah
Waxaan rabaa inaan ku xiro miiska 'Excel' khariidad qaab shp ah. Miiska waa la beddeli doonaa, markaa ma doonayo inaan u beddelo qaabka dbf, ama ha dhigin gudaha geodatabase. Leyli wanaagsan ayaa loogu talagalay ku daa fasaxyada fasaxan iyo tallaabo tallaabo ah oo isha lagu hayo ArcGIS 9.3 ka soo Acer Aspire One.
Tusaale ahaan waxaan isticmaali doonaa xogta ay bixiso xyzmap, ka faa'iideysiga xayeesiinta bilaashka ah maxaa yeelay waxay haystaan ​​qalab aad u fiican oo aad ku xiri kartid ArcGIS Google Khariidadaha ku dhajiya aragtida sida lakabka.
1. xyzmap bixisaa map adduunka ah ee format file qaab, oo leh dbf ay ku jiraan laba tiirar ah; oo la code dalka iyo mid ka mid ah magaca.
2. Waxaa sidoo kale ku jira feylka Excel oo leh xogta tirakoobka ee waddanka, iyo tiir darro leh lambarka waddanka.
Ujeedadu waa inaad miiska sharraxaad ka dhigto khariidada, dibad ahaan si aad u sii wadi karto inaad la shaqeyso inta aad samayn karto hawlaha khariidada iyo qaabeynta.
Xalka tallaabooyinka 3
Waxaan doonayaa inaan isticmaalo Manifold GIS, ka dibna waxaan isku dayi doonaa ArcGIS 9.3
1. Khariidad gali
Fayl> soo deji> sawir
2. Wac miiska
Fayl> xiriiriye> miis
3. Jaantusyo isku mid ah
Hadda taa, waxaan soo bandhigayaa miiska la xidhiidha khariidada, iyo:
Markaa xiriir cusub ayaa la doortaa, beerahana waa la xushay
Taas ka dib, nidaamku wuxuu kuu ogolaanayaa inaad doorato tiirarka aad rabto inaad muuqato. Iyo voila, hadda miisaska ayaa xiriir la leh kuwa ka imanaya miiska banaanka waxaa lagu arki karaa cawlan. Isbeddel ku samee Excel oo aad rabto inaad aragto cusboonaysiinta dalabka midig guji miiska oo xulo Macluumaadka cusbooneysiin.
Iyadoo leh ArcGIS.
Waa inaanay aheyn mid aad u adag, laakiin hadda isticmaalaya qalabka Ku dar Join, ma samaynayso tallaabada ugu horreysa. Farriinta uu qunsulku dirayo ayaa ah in miiska Excel uu u baahan yahay Aqoonsiga Shayga.
Saaxiibo xyzmap kugula talin inaad u gudbiso xls-ka dbf, laakiin tani ujeeddadu ma ahan jimicsiga. Haddii qof na caawiyo, bulshada ayaan wax u qaban doonnaa.
Post Previous" Hore Aulasca, kheyraad badan oo GIS ah
Post Next Tani waa qormadaydii ugu dambaysayNext »
5 Jawaab ah "Ku lifaaq khariidad miis Excel ah"
khariidadaha hareeraheeda isagu wuxuu leeyahay:
Hello, waxaan rabaa in aan khariidado ku sameeyo khariidadaha google ee leh aragti dadweyne oo halkaa ku jira xogta dumpka ee sahanka oo aan ku dhisay qaabab google ah. Waxaan ku guulaystay inaan foomka google-ka u gudbiyo si aan uga fariisto oo aan uga soo dhoofo miiska sida muraayadaha google. Arrintaasi waa, in maaddada sahanku ka jawaabto, faylka dheeraadka ah ee la xidhiidha waa la dhammeeyaa, laakiin khariidadaha google ayaan xitaa ogaan. Ma jirtaa qaab kasta oo lagu heli karo khariidada waqtiga saxda ah? Waad ku mahadsantahay horayba meel kasta oo aad nagu siin kartid!
Isabel franco isagu wuxuu leeyahay:
miyaad u noqon kartaa mid gaar ah fadlan
Jair AO isagu wuxuu leeyahay:
Laakiin sida aad ku dari file Excel ah sida lakabka ah in ka ArcCatalog ku aadan arki karin oo ku dar il calaamadee geed ma sax ah ii soo gudbin eegin waa in loogu badalo si DBF, iyo in ay kala duwan yihiin Excel ah 2007 cusub Ha aad si toos ah u DBF diiwaan gelin kartaa.
Waad ku mahadsan tahay Jose, faallo aad u fiican
José Paredes isagu wuxuu leeyahay:
Arcgis waxaad ku xiri kartaa miiska sare, laakiin waa inaad si toos ah ugu furtaa sidii inay ahayd hal lakab oo dheeri ah ... (tani waxay ansax ku tahay xitaa faylalka qoraalka xaddidan).
Marka aad tahay gudaha MXD ah, ka dibna aad samaynaysid ah ku biiro, laakiin iyada oo aan la isticmaalayo qalabeed ah, laakiin ka badhanka midigta on lakabka oo aad rabto in aad xiri.
Mar alla markii aad la xiriirto, waad ka beddeli kartaa faylkaaga XLS heer sare isbeddellada ayaa ka muuqan doona astaamaha khariidadda la xiriirta, ugu dambeyntiina waa inaad dib u siisaa ...